iPad - Nhau dze iPhone | Nhau dzePhone (Peji 3)
Charge uye teerera kune yako iPad Pro neiyi Moshi adapter
Moshi inotipa USB-C adapta inotibvumidza kubhadharisa yedu iPad Pro isu tichiteerera kumimhanzi nemahedhifoni edu
Iyo nyowani iPad Mini 5 ichaenderana neApple Penzura uye Smart Khibhodi
Zvinoenderana nekubuda kwazvino, iyo nyowani iPad Mini 5 ichaenderana neApple Penzura uye Smart Khibhodi, iyo iPad Pro Mini?
Apple inogovera vhidhiyo nyowani yezvazviri kunyora mavhidhiyo neiyo Pro Pro
Apple inotiratidza kuti ndizvo zvese zvatingaite maererano nekugadzirisa vhidhiyo neiyo Pro Pro uye nekushandisa kwakakodzera.
Adobe Photoshop Sketch uye Illustrator Dhirowa iPad zvino inowirirana neApple Penzura 2
Adobe inogadziridza maviri ayo anozivikanwa dhizaini ekushandisa, Photoshop Sketch uye Illustrator Dhirowa, ichivaita kuti ienderane neiyo nyowani Apple Penzura 2.
6 mhando nyowani dzePadad dzakanyoreswa neEurasian Economic Commission
Iyo Cupertino kambani inonyoresa 6 nyowani iPads neEurasian Economic Commission saka tichakurumidza kuve nemhando nyowani
Dzivirira yako iPad Pro neMoshi iVisor uye Versacover
Isu takaedza iyo Versacover kesi uye iyo Moshi iVisor skrini inodzivirira, imwe yeakanakisa maseti ekudzivirira edu iPad Pro 360º
iPad Pro 2018, inguva yePost-PC iri kutanga here?
Iyo yazvino iPad Pro iyo Apple ichangobva kuburitswa inoonekwa senzira yekutanga chaiyo kune akajairika makomputa. Iwe une simba rakawanda, ko software?
Itsva yakakosha iPad uye iPad mini 5 yekutanga 2019
Yekutanga iri kuswedera uye, pamwe nayo, iyo yekuvandudza zuva reiyo inosarudzika iPad. Panguva ino, zvinoita sekunge ...
Zagg Inosvitsa Mutsva Mutsva Wekhibhodi Inovhara iyo iPad uye iPad Pro
Mugadziri wenyaya dzePadad Zagg, atangisa mutsara mutsva wezviitiko zveiyo iPad uye iPad Pro mune avo akasiyana mavhezheni.
Mifananidzo mitsva yeiyo iPad mini iyo yaizotangwa gore rino kuoneka
Iyo iPad Pro inokomberedza zvishoma kupfuura mamwe mamodheru, asi inoratidza zvimwe
Apple inotsanangura maitiro ekugadzira iyo iPad Pro uye inoedza kutsvaga chikonzero cheBendgate iri kuzadza mafafitera
Iyo inogona kuve yekutanga iPad mini 2019 kesi yakaburitswa
Iyo 2018 iPad Pro inosangana nemhando yepamusoro yeApple
Mazuva mashoma apfuura takakuudza kuti mamwe mayuniti eiyo nyowani iPad Pro mamodheru egore rino aive akakombama ...
Tropico yave kuwanikwa yeiyo iPad
Iyo iPad mini ine yakawanda skrini uye nyowani yekupinda iPad ye2019
Mamwe ma2017 iPad Pro ane anopenya mavara pazvikwiriso
Sezvo wabvuma kuti mamwe eiyo 2018 iPad Pros anouya akapetwa, kunyangwe mubhokisi, izvozvi ...
Dzimwe iPad Pro inouya yakapetwa mubhokisi uye Apple inozviziva
Apple ingadai iri kushanda kugadzira modem yayo machipu
Ruzivo rwaburitswa kuti vakomana veCupertino vanogona kunge vari mukuvhima kuti vagadzire yavo modem chip yeiyo inotevera iPhones uye iPads.
Iye zvino unogona kutenga iyo Apple 18W USB-C magetsi adapter
Imwe yemitambo mitsva yeiyo nyowani iPad Pro yegore rino 2018 kwave kuri shanduko yekubatanidza kwe ...
Iyo iPad 2018 yave kuwanikwa muchikamu cheApple chakagadziriswazve
Console-chikamu chemifananidzo inouya kuNBA 2K yakagadzirira iyo nyowani iPad Pro
Iyo nyowani NBA 2K iri pano yeiyo nyowani iPad Pro, mutambo wekutanga uyo unotiunzira isu mamwe ekunyaradza magirafu kuCompertino nhare mbozha.
Apple inosimbirira: iyo nyowani iPad Pro inogona kunge iri yako inotevera komputa
Iyo iPad Pro ndiyo inoratidzira mudziyo weiyo Cupertino vakomana mushure mekupedzisira Keynote. Yakaenda iyo iPhone kugadzira nzira yeiyo nyowani piritsi Vakomana vanobva kuCupertino vanotangisa nzvimbo nyowani iyo yavanosimbirira panzvimbo iyo iyo nyowani iPad Pro inogona kugadzira yemazuva ese makomputa.
Satechi inotangisa yekutanga USB-C Hub yeiyo nyowani iPad Pro ine HDMI 4K, Minijack, USB-C, uye USB-A
Mugadziri wezvishongedzo zveDevices, Satechi, ari kumberi nekutanga itsva USB-C Hub yeiyo nyowani iPad Pro ine 4 matsva maficha.
Adobe Lightroom inogadziridzwa ichiwedzera rutsigiro rweiyo nyowani iPad Pro, iPhone XS uye XR
Mushure mekurumbira kukuru kwayakaita, Adobe inogadziridza Lightroom yeIOS kuwana rutsigiro rweiyo nyowani iPad Pro uye nyowani Apple Penzura.
Nzvimbo dzekutamba ikozvino dzinotibvumidza kuti tiwane chechitatu-bato zvemukati munzira iri nyore
Iko kunyorera kutanga kuronga muSwift kubva kuIpad, Nzvimbo dzekutamba dzakangovandudzwa kunatsiridza mukana wechitatu-bato zvemukati mahara.
Apple ichangobva kuunza iwo matsva iPad Pro mamodheru eiyi 2018, iyo 11-inch iPad Pro uye ...
Aya ndiwo marambiro matsva ePad Pro Pro 2018 anodonha. Kutanga «kudonha bvunzo»
Chii chatingaite neiyo USB-C chiteshi cheiyo nyowani iPad Pro 2018
Kana iwe uchiri kusaziva rudzi rwemidziyo iwe yaunogona kubatanidza kune yako nyowani iPad Pro ne USB-C kubatana, mune ino chinyorwa tichajekesa kusahadzika kwako.
Vandudza yako iPhone, Apple Watch kana iPad neaya eBay madhiri
Kupemberera Zuva Rekutenga Pasi Pose, iro rinopembererwa musi wa11-11, vakomana vepaBay vakaisa kwataigona nhamba huru yezvinhu zvinonakidza zvatisingakwanise kupotsa.
Inosimbiswa, iyo nyowani iPad Pro ine simba kunge 15-inch MacBook Pro
Mushure mekutanga kweGeekbench bvunzo dzakaitwa pane nyowani iPad Pro, iyo data inosimbiswa: ine simba kupfuura akawanda malaptops pamusika.
Dhawunirodha iyo nyowani iPad Pro mifananidzo
Kana iwe uchida kunakidzwa nemapikicha matsva anouya kubva kuPad ​​Pro, mune ino chinyorwa tinovaisa iwe chaunogona.
Iyo mharidzo Keynote yeiyo nyowani iPad Pro ikozvino yave kuwanikwa paYouTube
Iyo mharidzo yakakosha yeiyo nyowani iPad Pro, MacBook Air uye Mac Mini yave kuwanikwa pane Apple yepamutemo YouTube chiteshi.
Apple Penzura inogona kuverengerwa mahara mahara
Iyo iPad Pro ine 1 TB yekuchengetedza, ine 6 GB ye RAM, uye kwete 4 GB senge mamwe masimba
Ese ari maviri-inch iPad Pro uye iyo 11-inch modhi inotipa isu mune yayo 12,9 TB vhezheni 1 GB ye RAM, 6 GB kupfuura mamwe ese mamodheru akaunzwa aine mashoma simba.
Kufunga nezve kutenga iyo nyowani iPad Pro? iwe unofanirwa kufunga nezve kutenga AppleCare ...
Vakomana vanobva kuCupertino vakaisa mitengo yekugadzirisa iyo iPads Pro nyowani, uye isu takatokuudza kuti zvakanakisa kugadzira inishuwarenzi yakadai seAppleCare
Itsva iPad Pro: Mitengo, Zvimiro uye Zvese zvaunoda Kuti Uzive
Tsvaga nesu zvese nhau nezve iyo iPad Pro, pamwe nehunhu hwayo nemitengo.
Iyi ndiyo mitengo yeiyo nyowani iPad Pro 2018 renji
Pazasi isu tinokuratidza iyo mitengo yechizvarwa chitsva cheiyo Pro Pro, iyo Apple ichangoburitsa muNew York.
Nyowani Apple Penzura uye nyowani Smart Keyboard Folio
Tine itsva iPad Pro uye nayo inouya mitsva mitsva yakadai seApple Penzura nyowani uye nyowani Smart Keyboard Folio keyboard
Iyo Apple Penzura 2 yaizove neyakagadzirwa nyowani, kuita uye nyowani yekuchaja system
Iyo Apple Penzura yekuvandudza ndeimwe yenyaya dzekupokana dzatichaona mangwana, pamwe neiyo itsva iPad isina mafuremu uye matsva matsva maMacs.
Iyo iOS 12.1 beta inosimbisa kuti iyo Pro Pro ichave neFace ID uye kuti ichashanda mumifananidzo uye mamiriro
Kubudikidza neiyo iOS 12.1 beta kodhi, zvinosimbiswa kuti iyo nyowani iPad Pro inosvika kumusika neiyo Face ID tekinoroji yeiyo iPhone X, XS uye XS Max.
Izvi zvinogona kutaridzika sechizvarwa chitsva chePad Pro chichaunzwa muna Gumiguru 30
Isu tinokuratidza izvo zvazvino zvirevo zvakaburitswa izvo izvo chizvarwa chitsva chePad Pro chingaite senge, chinozoburitswa muna Gumiguru.
Adobe inozivisa Photoshop CC yePadad uye matsva maapplication emahunyanzvi ekugadzira
Iyo Luna Ratidza zvishongedzo zvinotibvumidza isu kubatanidza yedu iPad kune Mac kuishandisa seyechipiri skrini yave kuwanikwa pamusika
Zvakavanzika zveiyo nyowani iPad Pro zvinoratidzwa ... Face ID ichauya kune iyo nyowani iPads pamwe neUSB-C inotibvumidza kushandisa ekunze skrini.
Apple inotipa mana emahara makosi kuti uwane zvakazara kubva iyo iPad muchimiro chee-bhuku
Vakomana vanobva kuCupertino vangoburitsa makosi mana emahara emabhuku eApp kuti vawane zvakanakisa kubva paIpad.
Ongororo yeiyo EasyAcc 20.000 mAh simba bhangi
Isu tinoongorora EasyAcc simba bhengi, bhatiri rekunze iro ratinogona kudzoreredza yedu iPhone ne iPad pazviitiko zvakasiyana tisingazvipinze zvakare.
Logitech Crayon, ndiyo yekutanga yakasarudzika peni yedhijitari yeiyo itsva 9,7-inch iPad
Logitech haimboregi kutishamisa uye ikozvino vanopa nyowani yedhijitari peni iyo inozviratidzira inoshamisa kweiyo ...
IPad Pro 2018 Inogona Kuva Nediki Bezel Uye Flatter Edges
Yekutanga kushandurwa kunoenderana neruzivo rwakaburitswa yasvika pakubuda uye kuratidza iyo Pro Pro isina bhatani reImba neFace ID system uye mativi akapfava.
Iyi inogona kuve iyo nyowani iPad Pro 2018
Ivo vanoonekwa. Mimwe mifananidzo nemavhidhiyo eiyo 3D modhi inogona kutiratidza iwo maitiro eiyo Pro Pro 2018 iyo Apple ichauya svondo rinouya
Mhosva yeinotevera iPad Pro 2018 inotisiya isu tichishamisika
Nyaya inofungidzirwa nyowani yeiyo Pro Pro iyo Apple ichafumura uno Gunyana inotisiya isu tichishamisika nechinhu chisingazivikanwe kusvika ikozvino
Bhatiri rePadad rinoputika mukati meApple Chitoro muAmsterdam
Zvinosiririsa zvinoputika bhatiri reiyo iPad inoratidzwa muApple Chitoro muAmsterdam uye inomanikidza chitoro kuti chibude kuenda kune avo vakawirwa nenjodzi.
Iyo nyowani iPad Pro ine USB C chiteshi inogona kuvhurwa gore rino
Uye ndezvekuti mamwe macheni emaketani angave achiyambira nezvekuvhurwa kweiyo nyowani iPad Pro ine USB C chiteshi ...
Iyo beta 5 yeIOS 12 inopa mhedziso yeiyo iyo interface yeiyo iPad Pro inogona kuve isina mafuremu
Kuburitswa kwazvino kweiyo yechishanu beta yeIOS 12 inoratidza kuti iyo interface yePad Pro isina mafuremu angave akaita sei isu ataona nekukurumidza.
Iyo nyowani Samsung Galaxy Tab S4 inotarisa pane kugadzirwa
Parizvino, ivo chete vagadziri vanopa mapiritsi ane mashandiro akafanana necomputer pamusika ndiSamsung neApple. Kunyangwe Samsung yakazivisa zviri pamutemo iyo Galaxy Tab S4, piritsi iro rairi kuda kuita sarudzo chaiyo kune iyo Pro Pro nekuda kwekuita kwayinotipa.
Kutanga iyo AirPods bhokisi uye ikozvino iyo iPad isina mafuremu, isina bhatani uye isina notch. IOS 12 kodhi inoramba ichitaura
Uye ndezvekuti mushure me beta vhezheni dzakatangwa neApple sosi kodhi yeiyi irikuzivisa zvakavanzika zvakakosha ...
Iyo nyowani iPad Pro yaizotevera mukumuka kweiyo iPhone: kuonekana 3,5 mm jack, mhoro Face ID
Apple inogona kunge iri kufunga nezvekuchinja chinzvimbo cheSmart Connector kusvika pasi kuti iwedzere Face ID mashandiro kune iyo Pro Pro.
Microsoft itsva Surface Go inoda kuve imwe nzira kune iyo iPad
Iyo Redmon-yakavakirwa kambani yakaunza iyo Surface Go, imwe nzira yekutarisa yeiyo iPad, ine yakazara vhezheni ye Windows 10
Mavhidhiyo mana eApple, panguva ino protagonist iiyo iPad
Chiso ID pane iyo iPhone X yaive nyeredzi yechiziviso chitsva uye ikozvino yave nguva yake ...
IPad ine Chiso ID inoramba ichiwana mapoinzi muIOS 12
Isu tinoenderera mberi nerunyerekupe uye zvinoratidza izvo zvinonongedza zvakananga kusvika kweIpad ine Face ID, mashoma mafuremu ...
iOS 12 Inounza iPad Pro Multitasking kune Nhaka iPads
iOS 12 inotiunzira iyo yakanyanya kutarisirwa yepamusoro multitasking iyo yatinogona kuona muPad Pro kune iyo yekare iPad, inosvika kumatatu panguva imwe chete maapplication pane edu maPads.
Logitech Slim Combo uye Slim Folio, yatove inowirirana neiyo iPad 2018
Logitech yakaratidza yayo yakavandudzwa vhezheni iyo Smart Combo uye Smart Folio, maviri ma keyboards anoenderana neiyo iPad 2017 uye 2018.
Inonakidza iPad Pro pfungwa ine yakaderedzwa bezels uye yakakomberedzwa mamakona emakona
Isu tinokuratidza zano idzva reiyo 11,9-inch iPad Pro, iine mafuremu akaderedzwa uye inogara saizi yakafanana neiyo 10,5-inch modhi
Apple inogadzira yemahara app, Mabasa, anowanikwa kune vadzidzisi
Iyi sarudzo nyowani inowanikwa kuvadzidzisi uye vadzidzi vane "rombo rakanaka" kushandisa iyo iPad se ...
Zagg Inotangisa Mbiri Nyowani iPad Kodhi Kodhi Inosanganisira Apple Penzura Rutsigiro
Vakomana veZagg vanotishamisa nekuburitsa maviri matsva emabhodhi emabhodhi ePads edu, vachiwedzera rutsigiro rwakamirirwa kwenguva refu rweApple Penzura.
Anchor, iko kunyorera uye kutsikisa podcast ikozvino kunoenderana neiyo iPad
Iyo Anchor application yekurekodha uye kutsikisa yakajairwa podcast, ichangobva kuvandudzwa ichienderana neiyo iPad uye ichipa yakasanganiswa odhiyo edhita
Tropico iri kuuya kuPads gare gare gore rino
Chiziviso chakaitwa chepamutemo nhasi nemukurumbira mutambo mugadziri, Feral Inopindirana. Feral, inozivikanwa ...
Iyo iPad haisi iyo yakatengwa zvakanyanya piritsi kuMiddle East ne Africa
Apple's iPad haisati iri sarudzo inosarudzika yevashandisi vari kuMiddle East ne Africa, maererano nedata razvino rakaburitswa neIDC
Nekutarira kune inotevera iPad isina mafuremu, iOS 12 ichaunza zvimiro zveiyo iPhone X kune iyo iPad
iOS 12 inovhura matsva matsva mumaPads edu akagarwa nhaka kubva kuzviratidzo zvitsva zvakaunzwa ne iPhone X nekuda kwekubviswa kwemafuremu uye kuiswa kwekiyi.
Logitech Crayon, iyo yakachipa Apple Penzura, yatovepo mumusika, kunyangwe iwe usingakwanise kutenga
Mwedzi miviri pamberi pechirongwa, Logitech yazivisa kuwanikwa kweLogitech Crayon, iyo yakachipa Apple Penzura inoenderana chete ne2018 iPad uye inongowanikwa nezvikoro.
Microsoft inoda kuburitsa itsva-ine mutengo wakaderera pamusoro kukwikwidza neiyo € 349 iPad
Vakomana vanobva kuBloomberg vanoburitsa nhau dzekuti Microsoft iri kufunga nezve kuvhurwa kweSurface nyowani yakachipa kukwikwidza zvizere neiyo nyowani iPad ye2018.
Plasma ndiyo nyowani kesi modhi yeiyo Pro Pro kubva kuUrban Armor
Iyo UAG yakasimba ichangobva kuburitsa modhi nyowani yenyaya yeiyo iPad Pro, iyo Plasma renji, renji iyo inotipa isu kudzivirira kwemauto kubva kudonha kuchengetedza yedu iPad Pro kusvika pakakwirira.
Uchishandisa iyo iPad mune yekuvaka kambani inochengetedza $ 1,8 miriyoni
Imwe kambani yekuAmerican yekuvaka inoti kubva payakatora iyo iPad panzvimbo yekuvaka, mari yakabatana yakachengetwa yave $ 1,8 miriyoni pagore.
Mushure memakore mana mumumvuri, iyo iPad inodzokera kune iyo podium yekutengesa kwaApple
Iyo iPad inodzokera kumatunhu ekutengesa emakore mana apfuura mushure mekuvandudzwa kweiyo iOS 11 iyo inotibvumidza isu kuita kunyange zvimwe zvinhu pane edu maPads.
iPad 2018 kana kuti simba riri sei kumashure uye chete maapplication ane basa
Iko iPad 2018 yakanaka kutenga? Apple yave ichibudirira neyakavhurwa? Simba ndiro rakakosha here pakusarudza kutenga kwako? Hatitendi.
iOS 11.3 yePadad inosanganisira nyowani bhatiri maneja kuti igare yakachengeteka
iOS 11.3 yatove pakati pedu. Unogona kumutsiridza yako iPhone kana iPad uye uone kunatsiridzwa. Uye yeiyo iPad mutyairi webhatiri mutsva wawedzerwa
Logitech Rugged Combo 2, yakakosha iPad keyboard yevadzidzi
Iyo Logitech Rugged ombo 2 keyboard / sleeve ndeye inofanirwa-kuve neyekushandisa kana iwe uchizoshandisa iyo i iPad mukati mekirasi. Iyo keyboard inopokana nezvose
Iyo Logitech Crayon nyowani inongowirirana chete neyechitanhatu chizvarwa iPad
Iyo Inotarisirwa yakachipa Apple Penzura kubva kune vakomana vanobva kuCupertino, inonzi Crayon, ine mutengo wemadhora makumi mana nemasere uye ichangoenderana neiyo iPad 49.
Musiyano uripo pakati peiyo iPad 2017 uye iyo nyowani iPad 2018
Tinokuunzira kuenzanisa pakati peiyo iPad 2017 uye iyo nyowani iPad 2018 kuitira kuti iwe ugone kufunga izvo zvinoita kuti imwe iPad isiyanise kubva kune imwe uye sarudza nemazvo.
New iPad 2018, ine simba, inokwanisa uye ikozvino yakachipa
Ngatitarisei iyo nyowani iPad 2018, inokwanisa kushanda neApple Penzura uye nemutengo usati wamboonekwa mumhando iyi yezvigadzirwa.
Iyo itsva iPad 2018 inogona kuenderana neApple Penzura
Runyerekupe runoti Apple inogona kuvhura iyo iPad 2018 inoenderana neApple Penzura pachiitiko chinotevera munaKurume 27
Iyo utopia yeiyo iPad isina kana chero mafuremu
Handina mubvunzo kuti rimwe zuva tichaona iyo iPad isina kana mafuremu kumberi, uye iri ...
Kindle yeIpad Iye zvino Inotsigira Split View
Iyo Kindle kunyorera kwePad yakangovandudzwa kuitira kuti iko zvino ienderane neakasarudzika iPad Split Screen basa.
Nyowani iPad Pro paWWDC
Jun Zhang (Rosenblatt) achangobva kuzivisa kuti tinogona kuve nePad Pro nyowani mumwedzi mishoma kuWorldwide Developers Conference iyo Apple ichaita svondo rekutanga raJune muSan Jose.
Apple yakanyoresa mahwendefa maviri matsva ayo kuvhurwa kwawo kunogona kuitika mukati memwedzi waMarch mune chiitiko chisati chaziviswa
Iyo 12,9 ″ iPad Pro yave kuwanikwa muchikamu chakadzoreredzwa kuSpain
Uye ndezvekuti isu chete tanga tine aya 12,9-inch iPad Pro mamodheru kuti tisvike chikamu che ...
Mubatsiri waMicrosoft, Cortana, ave kuwanikwa iyo iyo iPad
Mubatsiri waMicrosoft, Cortana, achangomhara pane iyo iPad, kuitira kuti vashandisi vagone kudyidzana nayo sekunge vari kuzviita kuburikidza neWindows 10 PC, sekureba sekumbomhanya kwavakaita application.
SonarPen, imwe nzira yakachipa kuApple Penzura uye chero iPad
SonarPen chinyoreso chinoona kumanikidza pachiratidziro chechero iPAd, kunyangwe chizvarwa chekutanga. Mutengo waro unoputsa pasi
Iyo iPad ichiri iyo yakatengwa kwazvo piritsi pasi rose
Kune rimwezve gore, iyo iPad inoramba iri piritsi rinotengeswa zvakanyanya pasirese, pamberi peiyo hofori yekutengesa kweInternet, Amazon neSamsung, iyo yakarasikirwa nemugove wemusika gore rapfuura.
Iyo 10,5-inch iPad yatove iripo muchikamu chakadzoreredzwa muSpain
Uye ndezvekuti vhiki rapfuura yapfuura kubva pakusvika kweiyi nyowani yakadzoreredzwa kana kugadziriswa maPads kune webhu ...
iOS 11.3 inoratidza humbowo hweiyo nyowani iPad Pro ine Chiso ID
Ichi chinhu icho kune vazhinji vedu chingave chiri pachena, asi zvatozivikanwa kuti neApple hapana ...
PenzuraSnap, rinobva kadhi kutakura Apple Penzura
Gumi nembiri maodzanyemba anopa Penzura, nyaya yeAppel Penzura ine magineti rutsigiro iyo inobvumira kuti ibatanidzwe kune chero kesi yeiyo "Smart Cover" mhando.
Iyo 10,5-inch iPad Pro yatove mune Apple yakagadziridzwa chikamu
Apple inowedzera iyo 10,5-inch iPad Pro kune chikamu chayo chakagadziridzwa uye chakagadziriswa zvigadzirwa. Muchikamu chino chinozivikanwa ...
Yakawedzera Reality uye noti kutora, nyowani iPad Pro zviziviso
Apple yatanga zvigadzirwa zvitsva zveiyo Pro Pro pane yayo YouTube chiteshi. Mune ino kesi, misoro yakasarudzwa ndeiyi: Kutora Zvinyorwa uye Kuwedzera Kwechokwadi
Zagg inosvitsa keyboard + sleeve yeiyo 9,7-inch iPad ine mauto-giredhi dziviriro
Mugadziri Zagg achangobva kuunza keyboard nyowani ine yekudzivirira kwemauto kesi inomira madonhwe anosvika kumamita maviri pakureba, iine backlit keyboard
Apple inoenderera mberi nemushandirapamwe weKisimusi nekutanga matambo matsva eHermès uye maPad kesi matsva
Kutora mukana wemushandirapamwe weKisimusi, Apple ichangoburitsa tambo nyowani dzeHermès dzeApple Watch uye zviitiko zvitsva zveiyo iPad Pro.
Iyo nyowani yakachipa 9,7-inch iPad yaizosvika muna 2018
Zvinoenderana nerunyerekupe rwazvino, iyo iPad 2017 (iyo yakachipa iPad) yaizove neshanduro nyowani gore rinouya iri 2018. Pano tinofungidzira pane zvatingawana
Sei tichida PC kana tichigona kuve nePad Pro?
Uyu ndiwo mubvunzo uyo Apple inoisa vese vashandisi mune kusahadzika nezvekutenga ...
Apple inowedzera iyo iPad ya2017 kune iyo runyorwa rwekudzoserwa muSpain
Iyo 9,7-inch iPad yakatangwa munaKurume wadarika naApple yave kuwanikwa kune yako ...
11-musimboti A8X Bionic chip uye Face ID ye2018 iPads?
Runyerekupe nezve inotevera iPad mamodheru e2018 ramba uchisvika kune network uyezve ...
Frameless iPad Pro inopa inoita kunge inonakidza
Uye ikozvino sezvo isu tine nyowani iPhone X patafura isu tese tiri kufunga nezve zvimwe ...
Apple kuvhura isina hunyanzvi iPad muna 2018
Runyerekupe rutsva runovimbisa kuti iyo iPad isina mafuremu muiyo iPhone X maitiro anosvika muna2018 pamwe neApple Penzura nyowani, kuchengetedza LCD skrini.
Apple inoramba app yakashandura iyo yepamberi kamera kamera kuita bhatani
Vakomana vanotarisira maapplication paApp Store varamba iyo Luna Ratidza gadziriso iyo yakashandura iyo iPad kamera kuita bhatani
Iyo iPad 3 ichave chikamu chemidziyo yemazambiringa muna Gumiguru 31, zuva raanoshandura makore mashanu kubva payakamira kutengeswa
Delta Airlines ichachinja iyo Surface uye Lumia yeiyo iPad uye iPhone
Deltra Air Lines ichangobva kuzivisa kuti kutanga kwegore rinouya, ichatsiva iyo Surface neLumia nePad uye iPhone
Microsoft kuburitsa iyo LTE vhezheni yeSurface Pro muna Zvita
Microsfot inoronga kuisa iyo nyowani Surface Pro neLTE kubatana kutengeswa muna Zvita anotevera kukwikwidza neiyo Pro Pro LTE
Mashandisiro ekushandisa iyo itsva swipe ficha pane iyo ipad keyboard ne iOS 11
Tinokuratidza kuvandudzwa kweiyo iPad keyboard iyo Apple yakaverengerwa muIOS 11 kuita kuti kuiswa kwenhamba uye zviratidzo zvive nyore uye nekukurumidza.
Vatatu vatsva Apple mavhidhiyo anotiratidza mamwe mabasa eiyo iPad
Iyo iPad pasina mubvunzo ndeimwe yezvigadzirwa izvo zvinowirirana uye zvirinani zvinoenderana nenhau dzechitsva ...
Ndeipi piritsi yevana inonyanya kukurudzirwa? IPAD?
Isu tinokubatsira iwe kusarudza iyo piritsi yevana kana kutarisa kune vadiki kuti vatenge, uye pamusoro pezvose isu tichakuudza kana iyo iPad ichisangana nevateereri vevana.
Apple inoda kusimudzira zvishongedzo ne Smart Connector
Apple iri kuyedza kudzosera iyi mamiriro nekubatana pamwe neakasiyana zvigadzirwa vanogadzira nechinangwa chekupa zvimwe zvekushandisa.
Apple yakabudirira, iyo iPad inokura mukuzivikanwa zvakare
Aya ndiwo mabudiro akaita Apple kuitisa zvekare mukurumbira wechigadzirwa icho chaienderana nevazhinji mukupedzisira, kuvandudza kutengesa.
Akanakisa maapplication ekudhirowa neApple Penzura paPad Pro
Muchikamu chino tinokuratidza akanakisa ekushandisa ekudhirowa neApple Penzura paApple iPad Pro.
Tenga iyo nyowani 9,7 Pro iPad Pro ye579 euros
Tiri panguva yekutengesa uye mamwe emashopu uye zvitoro zvine hunyanzvi zvinotangwa nemitengo inonakidza ye ...
Zviziviso zviviri zvePad Pro zviripo zvino muSpanish
Wanga wave mwedzi kubva zvaziviswa zviviri izvi asi zvakazosvika nezuro pakatanga kambani ye ...
Iyo Apple Penzura inosvika muchikamu chakagadziridzwa cheApple che $ 85
Anenge makore maviri mushure mekutanga kwayo, Apple ichangobatanidza iyo Apple Penzura muchikamu chakagadziridzwa cheAmerican Apple Chitoro
Griffin anotangisa matsva ekudzivirira eiyo nyowani 10,5-inch iPad Pro
Griffin ndeimwe yemhando dzinozivikanwa pasi rose dzezvishandiso zveApple zvishandiso, uye vanogara vaine nyowani ...
Aya ndiwo maratidziro matsva emadhivadhi ePadhesi uye anofukidza ayo Apple akaunza anotaridzika
Iyo iPad Pro yakaonekwa ino nguva ichiperekedzwa nhevedzano yemakesi uye inovhara izvo kusvika parizvino tanga tisina kuona sePenzura kesi.
Iyo iPad Pro inokwanisa kuita mamwe mabasa zvakanyanya kunyangwe kupfuura MacBook Pro zvinoenderana neBenchmark.
iFixit inosimbisa iyo 4GB ye RAM ndangariro ye10,5-inch iPad Pro
Ichi chaive chimwe chezvakavanzika zvakachengetedzwa naApple pane iyo nyowani 10,5-inch iPad Pro uye ...
iPad uye iOS 11: chimwe chinhu chakaonekwa chichiuya, asi kwete nenzira iyi
iOS 11 yareva kusvetuka maererano nemashandiro anowanikwa paIpad, kukwakuka kwakakosha kunozoona ramangwana rayo.
Maitiro ekumanikidza padhuze maapplication pane iPad neIOS 11
Ndi iOS 11, nzira yatinopfiga mashandiro inoshanduka zvachose. Isu tinokuratidza kuti maapplication akavharwa sei paPadad ine iOS 11
Isu tinofananidza zvakatemwa zveiyo iPad Pro 9,7 uye iyo iPad Pro 10,5 inches
Nhau dzinoramba dzichiuya zuva rakatevera hurukuro yakakosha nezuro kuMcEnery Convention Center muSan Jose, ...
Zvese zvaunoda kuti uzive nezve nyowani 10,5-inch iPad Pro
Pakupedzisira, runyerekupe rwese rwakanongedzera kuvhurwa kweiyo nyowani 10,5-inch iPad Pro yakasimbiswa.
Nyowani iPad Pro
Iyo nyowani iPad Pro ine 10,5-inch screen uye mashoma bezels kupfuura chero imwe. Zvese zvekuti usability uye kutakurika zvinofambidzana.
Nei iyo nyowani yeSurface Pro isingaenzane neiyo iPad
Izvo zvakajekeswa neMicrosoft ndezvekuti Surface yayo haichazove inokwikwidza neiyo iPad, kana yaimbove.
Yakabvaruka 10.5-inch uye 12.9-inch iPad Pro kesi dzinowedzera kushamisika
Zvinotaridza kuti makuhwa pamusoro peiyo nyowani 10,5-inch uye 12,9-inch iPad mamodheru ari kumutsidzira. Panyaya iyi…
Iyo "hapana mabhureki" 10,5-inch iPad inogadzira mutsara
Zvinotaridza sekuti iyo mishumo yakayambira mwedzi mishoma yapfuura nezve kutanga kwekugadzirwa kwemhando nyowani dze ...
Apple Inoburitsa 7 Nyowani Mavhidhiyo pane Kuwanika pane ako Midziyo
Apple inoenderera ichiburitsa mashoma mashoma emavhidhiyo nezve zvigadzirwa zvawo uye ino nguva inonongedza kune imwe ...
Dhawunirodha iyo nyowani iOS 10.3.3 mifananidzo yakasarudzika kune iPad Pro
Yekutanga beta yeIOS 10.3.3 yatiunzira seyakanyanya kutsva matatu mapikicha matsva eiyo 12,9-inch iPad Pro
Nhoroondo yerufu rwakaziviswa: Apple ichasiya iyo mini mini
Sekureva kwenzvimbo dziri padyo nekambani, Apple inoronga kusiya iyo mini mini munguva pfupi iri kutevera, isina kugadzirisa mamodheru azvino.
Iyo iPad ye2017 haina kupindura kune 'Hei Siri' kana isu tisina iyo yakabatana netambo
Kunyangwe ichive chishandiso chinosanganisira iyo M9 chip, iyo nyowani iPad, kana iyo iPad ye2017 sekutsanangurwa kwazvinoitwa, hazvibvumidze iyo Hey Siri isingaite.
Iyo itsva iPad Pro uye mutauri weWWDC munaJune 5
Iyo WWDC yaigona kungounza kwete chete nhau maererano nesoftware asi isu zvakare taigona kuona itsva iPad Pro uye mukurumbira mutauri naSiri
Urban Armor Gear ine 10,5 ″ iPad kesi yakagadzirira Chikumi
Pasina mubvunzo isu tinowana ichi chinodonha kuda kuziva nezve mamwe anozivikanwa makavha efoni nhare kubva kune ese Apple uye Samsung ...
Kugadzirisa chirongwa chePad Pro Pro Smart Keyboard
Kana iwe uine Smart Khibhodi yeako 9,7-inch kana 12,9-inch iPad Pro uye urikucherekedza ...
HT Recorder yePadad, yemahara kwenguva shoma
HT Recorder yePadesi chishandiso chakanakisa kunyora nekugadzirisa zvinyorwa zvedu zvakananga neApple iPad.
Iyo bhatiri yeiyo nyowani Logitech keyboard yeiyo iPad 2017 inotora makore mana
Nguva dzese Apple painoburitsa ipad nyowani, vakomana veLogitech vanokurumidza kuburitsa zvishandiso zvitsva zveiyo ...
Apple ichafanirwa kutsiva iPads ine mhando nyowani
Mutongi anomanikidza Apple kutsiva iPads nemamodeli matsva muNetherlands, zvichipesana nemamiriro anoiswa neApple kune vatengi vayo.
Apple inotanga kutsiva iPad 4 nePad Air Air 2
Apple ingadai ichitanga kutsiva yakanganisika iPad 4 neyemazuva ano iPad Air 2 sezvo pasina kukwana kwakaringana kwekutanga
Dzimwe iPad Mhepo Zvikamu Zvichakubatsira Iwe Kugadzirisa iPad 2017
Sekureva kwevakomana paIFixit, akati wandei ezvinhu eiyo nyowani iPad 2017 akafanana neaya anowanikwa mune yekutanga iPad Mhepo.
Apple inovandudza vimbiso yeIOS iri nani pane iPad
Apple inoita kunge yakatsunga kugadzirisa iyo iPad Pro yekushandisa system kuti iite zvirinani. Uye isu tinogona kuve padhuze kupfuura nakare kose kuti tizvione zvichizadzika.
Kudzokorora kweiyo nyowani iPad 2017: simba uye mutengo hazvina kumbobvira zvakaenzana
Isu tinoongorora iyo itsva iPad iyo Apple ichangotanga, modhi ine mutengo unokwezva uye simba padanho rekuda zvakanyanya, kunyangwe riine kudhindwa kudiki.
Iyo nyowani iPad skrini inovandudza pane iyo iPad Mhepo 1 uye Mhepo 2
Iyo skrini yeiyo iPad 2017 inovandudzika kune iyo yePad iPad Air 1 uye 2 kunyangwe paine kusahadzika kwekutanga zvinoenderana neiyo iFixit bvunzo mushure mekubviswa kwayo.
Apple Inoburitsa Matatu Nyowani eTwitter-Akavakirwa Ads ePadhi Pro
Vakomana vanobva kuCupertino vatangisa nhevedzano nyowani yetatu maPro Pro kushambadzira inotevera imwecheteyo Twitter theme
iFixit yatove neiyo iPad Teardown uye hongu, ingangoita yakavandudzwa iPad Mhepo
Ichi chinhu icho isu tese tanga takajeka nezvacho uye ivo vasingafanire kutiudza isu, asi vachitarisa zvikamu ...
Zvimwe zviziviso zveazvino zvePad Pro zviripo zviripo muSpanish
Zvimwe zvezvino Apple zviziviso nezve iyo Pro Pro yatakaona mavhiki mashoma apfuura izvozvi zvave kuwanikwa muSpanish ...
Apple ichavhura riini iyo nyowani 10,5-inch iPad?
Iyo 10,5-inch iPad Pro ichiri mupenyu zvakanyanya kupfuura nakare kose, kunyangwe fungidziro yekuti yaizotanga riini inopesana
Iyo iPhone (RED) uye iyo nyowani iPad ikozvino yave kuwanikwa muApple Chitoro online
Apple inovhura iyo Apple Chitoro pamhepo kutanga pre-maodha ezvayo zvigadzirwa zvitsva, iyo iPhone (RED) uye iyo nyowani iPad, pamwe nezvimwe zvishongedzo.
Ndeipi pfungwa yeiyo iPad 2017 izvozvi?
Iyo nyowani iPad 2017 ine akawanda akanaka zvinhu uye zvimwe kwete zvakanyanya. Ndeipi poindi yekumisikidza iyi modhi panguva ino chaiyo?
Aya ndiwo marambiro eiyo iPad inosara mushure mekuuya kwemidziyo mitsva
Tinoda kuita muunganidzwa wekuti iyo iPad renji inotarisa sei kuvandudzwa kwatakapihwa nevakomana kubva kuCupertino nezuro
Apple inozivisa iyo nyowani iPad pa € ​​399
Apple yakazivisa iyo nyowani iPad, yekupinda modhi inotsiva iyo iPad Air 2 uye ine mutengo wekutanga we € 399
Iyo yepamhepo Apple Store inovhara uye zvinoita sekunge tichaona zvigadzirwa zvitsva nhasi
Kunyangwe kushamisika kwevamwe, chitoro cheApple hachiite kunge chakavharirwa kuchengetedza kuri nyore, asi kuunza michina mitsva.
Uye zvino runyerekupe runongedzera kuchidiki shanduko dzeiyo iPad Pro 2
Uye ndezvekuti isu hatisiye imwe yatinopinda mune imwe. Zvatakakurukura nezuro mu # PodcastApple ...
Apple inogona kuburitsa yayo 10,5-inch iPad kutanga kwaApril
Mutsva makuhwa anoti Apple inogona kuburitsa yayo nyowani 10,5-inch iPad pane chiitiko chaizoitika muna Kubvumbi
Itsva iPads inoita kunge iri kuyedzwa padyo neC Cupertino
Mhando ina dzePad dzino nyowani dzinoonekwa dzichizoedzwa munzvimbo dzakapoteredzwa neCopertino kuti itange kuburitswa zvakanyanya
Inogona kuitika Apple kuvhurwa kweiri kuuya svondo
Runyerekupe nezve chinhu chakakosha hachiwanzo kuitika mazuva ano uye nepo chiri chokwadi kuti Cupertino kambani inogona ...
Iyo inoyerera keyboard yakarongerwa iOS 10.3 inotanga kuoneka
Tiri kutaura nezve iyo inoyerera keyboard iyo yaizouya kune iyo iPad ine iOS 10.3 uye izvo zvaizotibvumidza isu kuti tinyore zvakanyatso nyatso mukati zvichienderana nemamiriro api ezvinhu
Iyo poster inosimudzira yemuvhi Logan, iri muTime Square, yakagadzirwa neiyo Pro Pro
Iyo posita yekusimudzira yeiyo Hugh Jackman yazvino firimu yakagadzirwa naDavid Rapoza pane iyo Pro Pro neApple Penzura neProcreate.
Apple inodhinda zviziviso zviviri zvitsva zvinokurudzira mikana yeiyo Pro Pro
Vakomana vanobva kuCupertino vatangisa zviziviso zviviri zvitsva apo inosimbisa hunhu hwePad Pro pamwe neApple Penzura
Yazvino iPad Pro chiziviso inouraya maprinta
Chiziviso chazvino cheiyo Pro Pro inoda kupa chikonzero chitsva chekuti isu tikande PC yedu kana Mac kunze kwehwindo uye titore iyo iPad Pro seyakajairwa mudziyo
Iyo 10,5-inch iPad ichave nesarudzo yepamusoro asi imwechete pixel density seiyo 9,7 iPad Pro
Runyerekupe rwazvino rwakanangana neiyo 10,5-inch iPad Pro inotaura kuti ichave iine resolution yepamusoro asi iyo pixel density.
Tichava nemaPads matsva, asi haazosvika kusvika Chivabvu kana Chikumi
Tinotarisira kuti Keynote mukati memwedzi waKurume mushure meMWC yapera, matinozoona maPads matsva asingazosvika kuApple Store kusvika Chivabvu kana Chikumi.
Apple yaKurume chiitiko: nyowani iPads uye… iPhone 7 uye 7 Plus mune dzvuku?
Iyo kambani iri kugadzirira chiitiko cheKurume chinotevera, mairi isu taigona kuona mitsva iPad Pro mamodheru uye inokatyamadza tsvuku iPhone 7 yakaratidzwa.
4 nyowani iPad Pro zviziviso izvo zvakapenga zvakanaka
Iyo iPad Pro ine hunhu hwakati wandei izvo zvimwe zvishandiso zvisina. Izvi zvakaratidzirwa mushandirapamwe mutsva wekushambadzira weiyo Big Apple.
iPad, mutungamiri mumusika unoramba uchidzikira zvishoma nezvishoma
Kunyangwe iko kudonha kwekutengesa, iyo Apple piritsi inoramba iri mutungamiri asina kutaurwa mumusika uko kugadzikana, simba uye nyore kwekushandisa kuri kukunda.
Iyo yazvino mishumo yekutengesa kwePadad inoratidza kuti izvi zviri kudonha dzimwe nguva, zvirokwazvo kwete izvo ...
Iko kuwanikwa kweiyo iPad Pro 12,9 ″ yakaderedzwa pamberi pekugona kuitika munaKurume
Kuwanikwa kweiyo 12,9-inch iPad Pro yakadzikiswa kusvika paunofanirwa kumirira kusvika kumavhiki matatu kuti uigamuchire.
Kunyangwe zvese, iyo iPad ichiri iyo yakatengwa kwazvo piritsi pamusika
Nhamba idzi dzinoti iyo iPad iri kutengeswa zvishoma uye zvishoma, asi izvo hazvisi kuitadzisa kuti igare iri piritsi rinotengeswa zvakanyanya pamusika.
Iyo iPad inotendeuka 7, tinoongorora nhoroondo yeApple piritsi
Tichatora kufamba nenhoroondo yeiyo iPad, chimwe chezvakanakisa zvishandiso zvakagadzirwa naApple, uye izvo Steve Jobs angazvirumbidza nazvo.
Kunyangwe paine runyerekupe rwekuti vazivisa chiitiko cheApple munaKurume kuzarura matatu matsva ...
Iyo Apple Penzura 2 inogona kusvika ino chitubu ine magineti mubati weiyo iPad
Kubva kuChina, runyerekupe rwakatanga kuoneka kuti Apple inogona kumutsiridza Apple Penzura mumwedzi mishoma.
Iyo 10,5 ″ iPad Pro ingaite kunge maviri maPad Mini akaiswa padivi padivi
Runyerekupe rwe10,5 "iPad Pro ingaite kunge maviri maPad minis akaiswa padivi nepadivi - mugadziri akaita math, uye izvozvi zvese zvinoenderana
Kukura kweiyo ipad nyowani kuchave pakati pegumi ne10 inches
Sekureva kwemishumo mitsva, iyo nyowani iPad modhi inotangwa naApple munaKurume uyu inogona kunge iine saizi yehukuru pakati pe10 ne10,5 inches.
Iyo 2017 iPad inogona kunonoka nekuda kwekushaikwa kwe10nm processor
Sekureva kweshumo rekutengesa, gore rinouya rePadad kugadzirwa kwemazhinji kunogona kunonoka nekuda kwekushomeka kwe10nm processor.
Nyowani yenguva-yenguva yakaderera muPadad kutengesa kutengesa
Zvinoenderana neruzivo rwechizvinozvino, Apple yakagadzirira kuvhura itsva Pro Pro muhafu yekutanga ya2017. Zvisinei,…
Iyo nyowani 10,9-inch iPad ichachengeta iyo yekubata ID yeiyo yapfuura iPad
Wese munhu akafunga kuti ichasanganisira iyo nyowani TouchID isina meiniki bhatani reiyo iPhone 7, asi hapana chiri kumberi kubva kuchokwadi, ichaenderera ne1st Gen TouchID.
Dzimwe runyerekupe nezve itsva 10,5-inch iPad
Nyowani nyowani dzinosimbisa kuti munaKurume tichava neIpad yehukuru hwakaenzana asi iine 10,5-inch screen, ichideredza mafuremu
Podcast 8 × 11: Iyo nyowani iPhone uye iPad ye2017
Chikamu chitsva cheiyo Actualidad iPhone podcast matinotaura nezverunyerekupe nezve iyo nyowani iPhone nePad, pakati pezvimwe zvinhu.
Apple inoda kuvhura matatu matsva ePads munaKurume 2017
Vaongorori vanofungidzira kuti matatu matsva maPad mhando anosvika pamusika munaKurume 2017.
ROMA: Yakazara Hondo ikozvino yave kuwanikwa yePadad ye € 9.99
Iwe unofarira sarudzo mitambo here? Zvakanaka, iwe uchafadzwa kuziva kuti ROMA: Yese Hondo yave kuwanikwa yePadad. Chii chauri kumirira kuti ubatisise icho?
Apple inotanga kutengesa yakagadziridzwa 9,7 iPad Pro muApple Chitoro online
Apple ichangobva kuburitsa iyo 9,7-inch iPad Pro mune yakagadziridzwa vhezheni, chishandiso icho parizvino chiri chete paAmerican webhusaiti
Ipo iyo iPad iri kutengesa zvishoma nezvishoma, Surface yeMicrosoft iri kutengesa zvimwe
Microsoft yakazivisa mazuva mashoma apfuura maakaundi egore, mairi matakaona kuti kutengesa kweSurface Pro 4 kwakakwira sei
Zviratidzo zvinofungidzirwa zveA10X processor zvinoonekwa uye zvinoita kunge zvine simba zvakanyanya kupfuura iyo A10
Alleged A10X processor mabhenji akaonekwa pamhepo achiratidza kuti iyo Pro Pro 2 ichave ine simba rakanyanya kupfuura iyo iPhone 7.
Apple inogona kuvhura iyo iPad Pro "mini" uye kugadzirisa iyo 12,9 ″ modhi
Runyerekupe rwazvino runoratidza kuti Apple ichavhura matatu matsva iPad Pro mamodheru gore rinouya, kusanganisira mini uye 10.1-inch modhi.
Benchmark yekutanga yeiyo iPhone 7 Plus yakaburitswa uye mhedzisiro yacho inoti ine simba kupfuura iyo 12.9-inch iPad Pro.
Izvi zvinoshamisa: Apple inoderedza mutengo weiyo iPad renji
Wanga uchifunga nezve kutenga iyo iPad? Nhau dzakanaka: Apple yadzikisa mutengo wemamwe mapiritsi ayo akakosha.
Apple inogadzirira kugadzirisa kwemakomputa ePad uye Mac
Sekureva kwaMark Gurman Apple yakagadzirira nhau dzakakosha kune yayo iPad Pro uye yeiyo yakazara renji reMac makomputa, ese akagadziriswa uye anotakurika
Maitiro ekutarisa bhatiri rakasara reApple Penzura
Nekusina chero chakatungamirwa kutiratidzira iro bhatiri danho reApple Penzura, Apple inotipa ruzivo urwu zvakananga paIpad
Gumi nembiri yeSouth's Inozivikanwa BookBook Mhaka Inouya kune 9.7-Inch iPad Pro
Kutevera kuburitswa kwegumi nemaviri South BookBook kesi yeiyo 12.9-inch iPad Pro, ivo vanovhura iyo BookBook yeiyo nyowani 9.7-inch iPad Pro.
DhindaCentral Pro yePadad yemahara kwenguva yakati rebei
DhindaCentral Pro inotibvumidza kupurinda chero mhando gwaro kubva kune yedu iPad pane chero Wifi kana isina waya purinda
Nei iyo iPad isina Calculator?
Kuti iyo iPad haina Calculator application ine tsananguro yayo, uye aimbove mushandi wekambani akatibvisa mukukahadzika nekutitaurira kuti sei.
37 matsva emabhangi ajoina Apple Pay muUnited States
Uye ndezvekuti 37 emabhangi matsva nemasangano anowedzerwa kuApple Pay muUnited States, ukuwo kuwedzera muEurope kunoramba kuri kushoma.
Apple inogona kudzora iyo AMOLED skrini kune "Pro" modhi yeiyo iPhone 8
Apple inogona kutora tekinoroji ye AMOLED yeiyo iPhone 8 skrini asi chete mune yayo Pro modhi, ichishandisa zvimwe zvese zvazvino maLCD skrini
Intel inovimba kuti iyo nyowani USB-C inovandudza uye kubvisa jack
Sekureva kwaIntel, USB-C zvirokwazvo iri idzva odhiyo standard inozove inozivikanwa munguva pfupi inotevera kana gare gare nekuda kwekubatsira kwayo
Instagram inovandudzwa nekuvandudza "Nhau"
Instagram yakagamuchira iyo yekuvandudza chete yekuvandudza iyo nyowani "Nhau" ficha. Isu tinokuudza iwe nhau dzinounzwa nesarudzo iyi.
Apple Watch mugadziri anoratidza mashandiro anoita sensor yemoyo
Bob Messerschmidt, mugadziri aishanda paApple Watch, akaburitsa pachena kuti mwero wakadaro weiyo Apple Watch's sensor yemoyo yakanga isiri nyore.
Iyo iPhone 7 inogona kusanganisira kuchaja nekukurumidza
Mufananidzo unofungidzirwa wedunhu rekuchaja re iPhone 7 unogona kuratidza kuti Apple nyowani nyowani ichave ichikurumidza kuchaja
Microsoft inotarisana neSurface uye iPad Pro mune yazvino chiziviso
Isu tinokuratidza ichi chiziviso chinoshamisira kubva kuMicrosoft mairi icho chinoshoresa iyo iPad Pro kuitira kuti uwane kutengesa kweSurface Pro 4.
Uchishandisa iOS 10 Mepu sechinotsiva TomTom
IOS 10 Mamepu rave rinopfuura chikumbiro chakaringana kune vashandisi vazhinji vanoda kushandisa GPS navigator pane yavo iPhone kana iPad.
Netflix kana Yomvi, tinotarisana nekunyorera kwePadad
Yomvi kana Netflix? Isu tinoisa zvinonyanya kufarirwa pa-kudiwa audiovisual zvemukati zvinoshandiswa muSpain zvinopesana.
Apple inogona kuvhura itsva 10,5 ″ iPad saizi gore rinouya
Sekureva kwemuongorori Ming-Chi Kuo, Apple inoronga kuvhura mhando nyowani dze10,5-inch iPad pamusika gore rinouya.
Apple inoronga iyo nyowani iPad 10,5 ″ ye2017
Ming-Chi Kuo anofanotaura kuti hakuzovi nechaPad Pro nyowani kusvika gore rinouya uye kuti itsva 10,5-inch modhi ichawedzerwa.
Kana iwe usiri kuda kurasikirwa neako Apple Penzura, Magnet ndiyo mhinduro yako
Iyo Magnet kesi yeApple Penzura inotibvumidza isu kudzivirira mukuwedzera kune "kunamatira" yedu Apple Penzura kuPad ​​Pro kuti usarase.
Main poster ye "Stranger Zvinhu" yakagadzirwa neiyo Pro Pro uye Apple Penzura
Kyle Lambert akaburitsa maitiro ake ekugadzira poster huru yeNetflix yakateedzana: "Zvinhu Zvisinganzwisisike", yakagadzirwa nePad Pro uye Apple Penzura.
Iyo iPad Pro inosvika muchikamu chakadzoserwa cheApple Chitoro pamhepo
Yekutanga iPad Pro modhi, iyo 12,9-inch, yatanga kusvika muchikamu chakagadziridzwa cheApple Store Online muUnited States.
Idzi ndidzo nhau dzeIOS 10 Beta 5
Apple yakaburitsa iyo Betas 5 yeayo ese mashandiro masystem nezuro. Mushure mekuzviedza pane akasiyana madhivhisi (Apple Watch, ...
Dzimwe nzira kune yepamutemo YouTube app yePad (1/2)
Nhasi tinowana dzimwe nzira dzakawanda kuYouTube yePadad yatinofanira kufunga nezvayo, tiri kuzopa mamwe acho
Logitech K780, imwe keyboard yemidziyo yako yese
Isu takaongorora iyo Logitech K780 Bluetooth keyboard, inoenderana nemidziyo yese uye mapuratifomu, uye nematatu ekukurumidza kuwana ndangariro
1Password inotangisa nyowani yekunyorera modhi nemwedzi mitanhatu mahara
1Password inotangisa nyowani yekunyorera modhi iyo iyo $ 2,99 pamwedzi iyo yatinogona kushandisa ese ayo mashandiro uye mashandiro, nemwedzi mitanhatu-yemahara kuyedzwa
Rio 2016 yatove neayo epamutemo Anwendung
Iko kunyoreswa kwepamutemo kweMitambo yeOlimpiki yeRio 2016 ine chirongwa chayo chepamutemo munyika medu uye kunobva paruoko rweRTVE. Isu tinokuudza zvaunotipa.
Yepasi rose vhezheni yeiyo Smart Keyboard yeiyo iPad Pro ikozvino yave kuwanikwa
Zvakatora chinguva, asi iyo International Smart Keyboard ye12.9-inch uye 9.7-inch iPad Pro yave kuwanikwa yekutenga.
Ko kana iyo Pro Pro yaive yako chete komputa?
Apple inotangisa shambadziro nyowani yekuverenga kunaka kweiyo iPad Pro kana ichienzaniswa nechero chero komputa kuti igone kuve komputa yedu.
Apple Inoburitsa Nyowani iPad Pro Ad: Chii chinonzi Computer?
Apple yakatanga chiziviso chitsva nezve iyo iPad Pro mairi iyo inoda kutitendisa kuti "ikomputa nyowani". Iwe uchatipwisa here nezvazvo?
Hakuzovi neJailbreak yemidziyo makumi matatu nemaviri
Pangu akasimbisa kuti 32-bit zvishandiso hazvizove, kana kwenguva pfupi, Jailbreak yeIOS 9.3.3, uye vazviita muReddit account yavo nyowani.
Pangu Jailbreak Utility Zvino Inoshanda pane iPad Pro
Iyo Pangu Jailbreak utility yatove kushanda pane iyo Pro Pro, iPod Kubata 6G uye zvakare inogadzirisa zvimwe zviputi.
Mabhangi eAustralia haasi kufara neApple Pay
Matatu emabhangi makuru eAustralia akakumbira zviremera zveantitrust kuti vapinde muhurukuro neApple
Iyo iPhone yakaipa here? Kwete, zvimwe zvese ndizvo zvinokanganisika.
Kunyangwe zvichingomira pachena kuti iyo iPhone yakaipa, chokwadi ndechekuti iyo smartphone haisi dambudziko raApple, asi iyo iPad neMac
Kwese kuburitsa kwatakatambira kusvika parizvino kunobva kuiyo iPhone 7, asi iyo yekutanga mifananidzo yeiyo iPad Pro 2 yatobuda.
Pangu anoburitsa Jailbreak yeIOS 9.2 - 9.3.3
Pangu yatanga Jailbreak nyowani yeIOS 9.2 kuenda kuIOS 9.3.3 inoitwa kubva pachigadzirwa chaicho uye chaunogona kushandisa izvozvi.
Une nguva yakareba sei uchitamba Pokémon Go? Isu tinokuratidza iwe neiyi diki dzidziso. Nekuti kuiziva kuri nyore kupfuura zvawaifungidzira.
Apple inosungirwa kutsiva madhizaini ayo neakagadziridzwa
Apple inotarisana nemuedzo mutsva muUnited States nekuda kwemutemo wayo wekushandura zviteshi muAppleCare +, ichipa zvigadzirwa zvakagadziridzwa
Amazon Prime Zvino inosvika kuSpain, inoendesa mu1 awa kuMadrid
Amazon Prime Zvino pakupedzisira inosvika muMadrid, sevhisi inounza chigadzirwa chako mune isingasviki maawa maviri evashandisi vePrimiyamu.
Netflix inorasikirwa nevanyori nekuda kwekuwedzera kwemitengo muzvirongwa zvayo
Netflix yakataura pamusoro pekupera kwekushomeka kwevashandi vayo, avo vasingatarisiri vakaita nezvekukwira kwemutengo kuri kuuya.
IPad Pro inowana 3D Kubata nekutenda kuApple Penzura
Iyo iPad Pro inogona kuwana mamwe 3D Kubata mabasa nekuda kweiyo Apple Penzura, uye muIOS 10 pane zvatove nezviratidzo zvacho sezvatinokuratidza muvhidhiyo ino.
Amazon Prime Vhidhiyo inogadzirira kuburuka muSpain
Amazon online terevhizheni sevhisi iri kugadzirira kumhara kuSpain mukati mehafu yepiri yegore uye ichafanirwa kurwa naMovistar.
TrainStation, inonyanya kufarirwa njanji simulator
TrainStation, simulator inonyanya kuzivikanwa iyo yatinogona kuwana muApple App Store uye zvigadzirwa. Isu tinokuudza iwe kuti chii chinonakidza mutambo uyu.
Tangram Smart Tambo, tambo yakangwara inowanikwa muApple Chitoro
Tangram Smart Tambo, tambo yakangwara inoshandisa tekinoroji ma sensors kudzora kusvetuka kwedu kusvika pakakwirira.
Anofungidzirwa kuti iPhone 7 anouya pachena mune ino vhidhiyo zvizere
Inofungidzirwa kuti iPhone 7 inouya kujekesa muvhidhiyo iyi zvizere, uko imwe neimwe yemakona echishandiso inokosheswa
"Planet yeMapurogiramu", Apple tv-show yeUnited States
Iyo terevhizheni chirongwa chinodaidzwa kuti "Planet yeApplication", isu tinokuudza iwe kuti iyi nyowani Apple chirongwa chine chii neichi chaicho show.
FreedomPop, yemahara nhare inosvika kuSpain
FreedomPop yakatobvumira dura rayo rewebhu kuitira kuti iwe unakirwe nemapakeji ebasa mahara kuSpain nedzimwe nyika makumi maviri neshanu.
Attention, Pokemon Go inowana kuzara kuwana kune ako maGoogle maakaunzi
Zvikumbiro izvo hazvifanirwe kuda kupfuura kuwana kamera kana nzvimbo (senge Pokemon Go), kumbira kuwana kune yedu yese data.
Isu tinoongorora iyo Mee Audio x7 Uye, inonakidza Bluetooth mahedhifoni
Isu tinoongorora Mee Audio x7 Uye, inonakidza mahedhifoni ane yakakwira tsananguro kurira uye yakagadzirirwa kutiperekedza panguva yemitambo maawa.
Dzimwe runyerekupe pamusoro pevara reramangwana iPhone 7
Iyo nzvimbo grey iPhone yaigona kushandura uye kudzokera pakuve yakasviba grey padhuze kune nhema, sekureva kwe ...
Maitiro ekuvhura Mac neApple Watch
Icho chitsva icho Apple chakaratidza mune yekupedzisira mharidzo yeMacOS Sierra uye mawOO3, uye izvo zvatove zviripo muma betas eese masystem.
Maitiro ekugonesa maviri Factor Kusimbiswa pane yako Apple account
Zvinhu zviviri-chokwadi zvinosimbiswa kuti ushandise zvimwe zvezvinhu zvitsva zveIOS 10, macOS Sierra uye watchOS 3. Tinotsanangura maitiro ekuishandisa
Yazvino gadziriso yeProcreate yakatakurwa nenhau, isu tinokuudza iwe zvachose ivo vese muApple News.
B & O inotangisa BeoPlay H5, mahedhifoni akagadzirirwa zvemitambo
Iyo B & O yakasimba ichangoburitsa maBooPlay H5 mabluetooth mahedhifoni anotibvumidza kunakidzwa nemimhanzi yedu nemhando yepamusoro
Aya ndiwo maitiro matsva eKeKKit
Mushure meWWDC 16, akawanda masoftware zvikamu akanganiswa, imwe yacho yanga iri HomeKit, iine runyorwa rwakanaka rwemidziyo mitsva.
APFS, iyo nyowani Apple faira system
Ngatidzidzei zvishoma nezve APFS, iyo nyowani faira system iyo inoshandiswa neApple zvishandiso kubva 2017
Iyi inogona kunge iri nyowani iPhone 7 nzvimbo nhema
Mushure merunyerekupe nezve nhema iPhone 7 ine capacitive uye yekumanikidza bhatani bhatani, ikozvino isu tine mamwe anoyevedza magadzirirwo ayo.
Ndekupi Apple Kubhadhara kuSpain?
Takasvika kuequator ya2016 uye hatisati tave nenhau dzekuti Apple Pay ichasvika riini kuSpain. Nei nharembozha yekubhadhara isiri kusvika kuSpain?
Google Mepu inovandudza tsananguro yemufananidzo wesatellite
Google irikushandisa mifananidzo iyi mududziro yepamusoro yeGoogle Mepu neGoogle Earth, tinokuratidza zvakatangira uye shure.